Mnangagwa to be assassinated - ZiMetro News
Home LOCAL NEWS “Mnangagwa to be assassinated, his body dragged through the streets”
“Mnangagwa to be assassinated, his body dragged through the streets”
“Mr President of Zimbabwe, confess your sins to God, repent, be baptized in the name of Jesus Christ, be filled with the holy ghost and listen to what God has to say or he is going to remove you.”
There have been claims that Mnangagwa has got enemies from G40 members, a breakaway group that supported Mugabe before and after the coup.
Recently, the government of Zimbabwe said a third force is operating to tarnish Mnangagwa’s image with regards to the recent abduction and torture of 3 female MDC Alliance activists.
Around 1530hrs, after addressing a Zimbabwe 2018 Harmonised Elections campaign rally at White City Stadium in Bulawayo, as Emmerson Mnangagwa left the stage with several other high-level Zanu-PF members, there was a blast very close to him.
Mnangagwa survived the blast with no injuries but others including Marry Chiwenga (wife of Vice President, Constantino Chiwenga) and Kembo Mohadi, sustained injuries.
Previous articleDNA tests prove Sjava is not the Father of Baby mama’s child
Next articleZimbabwe Army, Police joint operation causes panic